Ny voanjo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ny voanjo
Ahoana no mahasoa ny peno?
Mahafantatra ny tombotsoan'ny voankazo sy ny voankazo maina ny tsirairay. Fa na dia eo aza ny banga toy izany, dia ireo vokatra manan-danja indrindra, izay ara-bakiteny ara-bakiteny amin'ny vitamina sy ny zavatra mahasoa. Momba ny iray amin'ireo voankazo ireo ary hodinihana ao amin'ny famerenana. Mianatra bebe kokoa momba ny voaniho kesika, ny tombontsoany sy ny loza mety hitranga. Ny votoatin'ny kaloria sy ny akora simika. Ireo voa ireo dia heverina ho toy ny kalôria avo lenta - ao anatin'ny 100 g ny voa voajanahary 673 kcal.
Ny fomba hanadiovana voanio
Mihabetsaka ny mpampiasa an-trano maoderina mampiasa vokatra tsy mahazatra sy tsy fahita firy amin'ny sakafo, ary na dia tsy mahagaga aza ny olona eo ambony latabatra miaraka amin'ny anana, dia mbola azo lazaina ho mahagaga ihany ny voaniho. Na dia mety ho mora hita eny amin'ny tsena malalaka aza ireo voankazo ireo, tsy ny mpividy rehetra mahalala ny fisafidianana sy ny fanokafana azy ireo marina, ary misy fomba maro.
Tena ilaina sy fampiharana ny guarana
Maro kokoa noho ny teo aloha no niatrika izany anarana izany ho guarana, ho toy ny ampahany amin'ny fomba isan-karazany mba handresena na handrisika ny rafi-pitabatabana. Aorian'io anarana manintona sy tsy takatry ny saina io dia misy karazam-borona mahafinaritra sy mahaliana indrindra. Fa ny toetra mampiavaka azy io dia tsy fisehoan-javatra tokana ihany, fa manana toetra ilaina ihany koa, izay tena betsaka.
Coconut: ohatrinona ny kaloria, inona no ilaina, ny fomba fisafidianana sy misokatra, amin'ny zavatra mifamatotra
Ny voanio kokônôfia dia tandindonin'ny tropikaly, izay malaza amin'ny karazan-tsakafo misy azy, singa miavaka sy tombotsoa ho an'ny vatana manontolo. Ity voankazo ity, izay mipaka any amin'ny morontsiraka mafana, dia ampiasaina amin'ny sehatra maro amin'ny asa ataon'ny olombelona - no hodinihintsika ireo singa ao amin'ity lahatsoratra ity.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny voanjo